Izindaba - Imakethe yomhlaba yama-peptide we-fish collagen ilinganiselwa ku-USD 271 million ngo-2019.
Imakethe yomhlaba yama-peptide we-fish collagen ilinganiselwa kuma-USD 271 wezigidi ngo-2019.
Imakethe yama-peptide wezinhlanzi emhlabeni jikelele ilinganiselwa ku-USD 271 million ngo-2019. Le mboni kulindeleke ukuthi futhi ikhule ku-CAGR ka-8.2% ngesikhathi sesibikezelo sika-2020-2025. Inhlanzi ikhuthaze intshisekelo enkulu phakathi kwabenzi bemithi kanye ne-nutraceutical njengomthombo ocebile wama-bioactive compounds, kufaka phakathi ama-peptides namaprotheni. Ngenxa yokusebenza kwabo okuhle ekunakekelweni kwesikhumba nasezinweleni, ama-peptide ama-fish collagen athole ukuthandwa, futhi ukusebenza okuqhubekayo phakathi kwalezi zimboni kuholele abacwaningi ukuthi bathuthukise imikhiqizo ye-cosmeceutical emisha futhi esebenza kahle.
I-Collagen iyiprotheni eyinhloko yezicubu ezixhunyiwe futhi i-molecular yayo yakhiwa yimicu emithathu ye-polypeptide, ebizwa ngama-alpha chain, aziwa kakhulu futhi athengisa ngokushisayo ngenxa yokusetshenziswa kabanzi nezinzuzo zempilo yomuntu.
ICollagen yiqembu lamaprotheni avela ngokwemvelo. Ngenye yamaprotheni amade anemicu emide anemisebenzi ehlukile kuleyo yamaprotheni we-globular afana nama-enzyme. Iningi lama-invertebrates nama-vertebrate amaningi.